Xuska Maalinta Qarannimada Jabuuti oo si weyn looga xusay Qaahira,Antananarivo iyo Dunida daafaheeda | BuhodlePost.com
Xuska Maalinta Qarannimada Jabuuti oo si weyn looga xusay Qaahira,Antananarivo iyo Dunida daafaheeda
Jul 19, 2017 - jawaab
Sanca, Yeman (Buuhoodle Post)— Munaasabad lagu xusayay 40-sano guuradii ka soo wareegatay maalintii ay calanka ka qaateen Reer-Jabuuti gumeystihii Faransiiska ayaa si xarago leh maalintii Isniinta loogu soo bandhigay Magaalada Antananarivo ee Jasiirada Madagaskar, maalma uun ka dib markii mid taas la mid ah Qaahira si heersare ah loogu soo bandhigeen.
Waxa ay u damaashaadayaan maalin quluubtooda aad ugu weyn oo halyeeyo doorteen in ay u shihiidaan iyaga oo dalkooda yar iyo qoysaskooda ka difaacaya waxa ay ugu yeedheen, “Saancadaalihii Faransiiska”.
Mustafe Faarax oo ah arday wax ka barta Qaahira mar aan dareenkiisa wax ka weydiinay waxa uu yidhi, “Waa maalin xusuus ay naga mudan yihiin dadkii dhiigooda u huray farxadda aan yar iyo weyn wada darreemayno.”
Waxa ay isaga xog waramaan halgankii ay dhibka badan u soo marreen iyo maalintii ay dhalatay qaranimadoodu.Waxa ay sidoo kale, isku booriyaan in ay gacan mid ah ahaadaan, iyaga oo is xasuusinaya nabadda ay haystaan ee ay dad badan oo kale oo Geeska Afrika kula nool ay qiimo kasta ku waayeen.
“Waa maalin darreen wadaniyadeed oo gaar ah leh oo aan ku muujineyno dabaaldaga aan hoteelada waaweyn aan ku qabsaneyno, si aan jiilasha danbe ugu gudbino dhibka aan u soo marnay guushan”,ayuu ku daray Ardaygan Reer Jabuuti.
Waxa kale oo uu sheegay Mustafe in dhalin tartan labo jeer loo kala qabtay ku soo baxay ay ku soo bandhigeen heeso iyo ciyaar-dhaqameedyo dadkii daawanayay oo ay ka mid ahaayeen masuuliyiin sar-sare oo ka socday dalka Masar, wafti ka socday Midowga Dalalka Carabta, Safiirada Dalalka kale u jooga Masar iyo Jaaliyadda Soomaalida ay aad u la dhaceen.
“Munaasadan oo si ka duwan kuwii hore si heersare u soo agaasimay Safiirka dalka Masar u jooga Jabuuti Maxamed Duhur Xirsi ayaa waxa lagu soo casuumay masuuliyiin horey wasiiro Jabuuti uga soo noqday, xubno ka tirsan Baarlamaanka dalka Jabuuti iyo masuuliyiin kale.”
Waxa ay Jabuuti dhalatay 27-kii Juun, 1977-kii oo ay Qaramada Aduunka ka mid noqotay-waxa ayna dabaaldaga wadaan ilaa dhammaadka bisha Luulyo; haseyeeshe, taniyo Ciidii Soon Fur dadyowga Reer-Jabuuti ee ku kala nool dalka iyo Dunida daafaheeda waxa ay u muuqdeen dad labo jeer ciidaya. Waxa ayna u damaashaadayeen maalin quluubtooda aad ugu weyn oo ay halyeeyo doorteen in ay shihiidaan, iyaga oo dalkooda yar iyo qoysaskooda ka difaacaya waxa ay ugu yeedhaan, “Saancadaahilihii Faransiiska”.
Jabuuti oo bad iyo barriba daris kala ah Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea iyo Yeman ayaa ka mid ah dalalka Dunida ugu istaraatiijisan, taas oo Barriga Afrika ku xidhdha dalalka Gacanka Carbeed, Yurub iyo dalal kale. Badda Cas iyo Baabul Mandeb oo ay kulaaleyso darteed ayaa waxa ay soo jiidatay joogitaanka ciidamada dalalka Dunida ugu quwada weyn oo ay ka mid yihiin Mareykan, Shiine, Faransiis, Talyaani, Jarmal iyo Japan, kuwaas oo dhammaantood ay si mid ah u martigalisay.
Dowladda ayaa isku dayaysa in ay dardar hor leh galiso ilaha dhaqaalaha oo ay tayeynteeda sare u qaaday dhowrkii sano ee u danbeysay, taas oo shaqo abuur u sameyn karta dadweynaha Jabuuti oo aan qiyaastii ka badneyn 850,000.
Si hasta ba ha ahaatee, muddo laga joogo in ka badan 40 sano, dagaal labo qof mid uun guushiisa farxad galinaysa oo naxariis la’aan ah ayay iclaamiyeen halyeeyo buugaagta taariikhda Jabuuti ku qoran oo iska diiday in laga sarreeyo, kuwaas oo magacdooda si weyn loogu xuso maalmo badan oo farxad u leh dadka Reer-Jabuuti.